उत्कृष्ट खेलाडीलाई २ लाखको पृथ्वी पुरस्कार दिइने
७ पुस, काठमाडौं । राप्रपा नेपालको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय खेलकुद संघ नेपालले खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने खेलाडीलाई ‘पृथ्वी पुरस्कार’बाट सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राप्रपा नेपालका खेलकुद विभाग प्रमुख एवम् सभासद गणेश थापाले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल क्षेत्रमा उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गर्ने...
सचिन तेन्दुलकर बने विश्वकप ब्राण्ड एम्बेसडर
७ पुस, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले सचिन तेन्दुलकरलाई विश्वकप क्रिकेट २०१५ को ब्राण्ड एम्बेसडर घोषित भएका छन् । भारतीय क्रिकेट लेजेन्ड सचिन दोस्रो पटक विश्वकप एम्बेसडर घोषित भएका हुन् । यसअघि उनी २०११ मा पनि एम्बेसडर थिए । सचिनले अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने विश्वकपको प्रमोसनका लागि भूमिका खेल्नेछन् ।...
७ पुस, काठमाडौं । एन्टोनी ग्रिजम्यानको ह्याट्रिकको मदतमा एथ्लेटिको मड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा एथ्लेटिक बिल्बाओलाई पराजित गरेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा एक गोलले पछि परेको मड्रिडले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै ४–१ को जित हात पारेको हो । बिल्बाओले १७ औं मिनेटमा रिकोको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । तर, दोस्रो हाफमा खेल...
लिभरपुलले आर्सनललाई बराबरीमा रोक्यो
७ पुस, काठमाडौं । मार्टिन स्कर्टेलको गोलको मदतमा लिभरपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सनललाई बराबरीमा राकेको छ । आइतबार राति भएको खेलमा लिभरपुलले आर्सनललाई २–२ को बराबरीमा रोकेको हो । घरेलु मैदान एनफिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुलले ४५ औं मिनेटमा काउटिन्होको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । तर, पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा डेबुचीले आर्सनलका लागि बराबरी...
६ पुस, काठमाडौं । प्रथम दक्षिण एसियाली आमन्त्रण महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कर्भडहलमा आइतबार भएको खेलमा नेपाली महिला टोली भारतसँग ३-० को सोझो सेटमा पराजित भएको हो । खेल सुरुवातीदेखि नै निकै आक्रमक शैलीमा उत्रेको भारतसामु नेपाली महिला टोली निरिह बन्यो । पहिलो सेट २५-१६ ले...
वर्ल्डकप पछि अफ्रिदीले वन डे क्रिकेटबाट सन्यास लिने
६ पुस, काठमाडौं । पाकिस्तानी अलराउन्डर साहिद अफ्रिदीले आईसीसी वर्ल्डकप २०१५ पछि एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् । उनले टी-२० लाई भने निरन्तरता दिने बताए । उनी पाकिस्तानको टी-२० टीमका कप्तान पनि हुन् । न्यूजिल्याण्ड विरुद्धको ५ एकदिवसीय खेलमा नियमित कप्तान मिसबाह उलहक घाइते भएपछि अफ्रिदीले कार्यवाहक कप्तानीको भूमिका निभाएका थिए ।...
तेह्रौं आहा रारा गोल्डकप माघ २० देखि
६ पुस, पोखरा । अन्तर क्लब आमन्त्रित तेह्रौं आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता माघ २० देखि पोखरा रंगशालामा हुने भएको छ । प्रतियोगितामा नेपालका ‘ए’ श्रेणीका क्लब, विदेशी टोली, पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका क्लबहरु र आयोजक सहारा क्लब पोखरा गरी कुल १२ टोलीको सहभागिता रहने छ । प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेतालाई नगद एवम् ट्रफी, उत्कृष्ट...
मेस्सीको दुई गोलसँगै बार्सिलोना विजयी
६ पुस, काठमाडौं । लुइस स्वरेलले स्पेनिस ला लिगामा पहिलो गोल गर्दा बार्सिलोनाले कोर्डोबामाथि सहज जित हात पारेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले स्वरेजसँगै लिओनल मेस्सीको दुई गोलको मदतमा कोर्डोबामाथि ५–० को जित हात पारेको हो । जितसँगै बार्सिलोनाले लिग लिडर रियल मड्रिडसँगको अंक दुरी १ मा झारेको छ । यद्यपि रियल...
६ पुस, काठमाडौं । स्पेनिस जाइन्ट रियल मड्रिडले फिफा क्लब वर्ल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार राति भएको फाइनल भिन्डन्तमा रियल मड्रिडले साउथ अमेरिकन च्याम्पियन सान लोरन्जालाई २–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । सन् २०१४ मा रियल मड्रिडले चार उपाधि जितिसकेको छ । च्याम्पियन्स लिग, कोपा डेल रे र युरोपियन सुपर कप...
अन्तिम सेकेण्डको गोलमा कोलकत्ता बन्यो च्याम्पियन
५ पुस, काठमाडौं । खेल सकिन केही सेकेण्ड बाँकी छँदा मोहम्मद रफीकले गरेको गोलको मदतमा एथ्लेटिको कोलकत्ताले इण्डियन सुपर लिगको उपाधि जितेको छ । शनिबार भएको फाइनल भिडन्तमा सचिन तेन्दुलकरको केरला ब्लास्टरलाई १-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै अर्का क्रिकेट हस्ती सौरभ गांगुलीको टीम कोलकत्ताले उपाधि उचालेको हो । खेलमा केरलाले कोलकत्तामाथि लगातार दबाव कायम...
﻿ स्टर्लिङ बने युरोपियन गोल्डेन ब्वाइ
५ पुस, काठमाडौं । लिभरपुलका रहिम स्टर्लिङ ‘युरोपियन गोल्डेन ब्वाइ’ अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । यो अवार्ड युरोपका उत्कृष्ट युवा खेलाडीलाई दिइन्छ । गत सिजन लिभरपुल प्रिमियर लिगको उपविजेता बन्दा स्टर्लिङ टोलीको महत्वपूर्ण सदस्य थिए । साथै विश्वकप तथा युरोकप छनोट फुटबलका लागि इंग्ल्याण्डको टोलीमा रहे । अवार्ड पाउँदा निकै खुसी लागेको उनले बताए । स्टर्लिङले...
म्यानचेष्टर सिटीले चेल्सीलाई भेट्टायो
५ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्याचेष्टर सिटीले लिग लिडर चेल्सीमाथि दबाव बढाएको छ । शनिबार राति भएको खेलमा क्रिष्टल प्यालेसलाई ३-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिटीले चेल्सीसँग अंक बराबरी गरेको हो । डिफेण्डिङ च्याम्पियन म्यानचेष्टर सिटीको १७ खेलबाट ३९ अंक भएको छ । चेल्सीको पनि समान अंक छ तर, उसले एक...
« अघिल्ला 1 … 338 339 340 341 342 … 402 पछिल्ला »
पत्रकार महासंघमा गोविन्दको प्यानल जीत नजिक, प्रदेशमा कसले जिते ? (सूचीसहित)
यी सांसद् जो संशोधन विधेयकमा मतदान गर्न गएनन्
ट्याक्सीबाट ठगिएका सांसदको पीडा – हामी त निरीह छौं, अरुको के होला ?
देशका २० स्थानमा कलात्मक ‘सिग्नेचर’ पुल बन्ने
पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेजः देउवाको भारत भ्रमणदेखि संविधान संशोधन अस्वीकृतसम्म
कांग्रेसको सम्पत्ति ११ करोड, चुनाव लड्दा सकियो १ करोड
भदौ १६ देखि सुपथ मूल्य पसलः पीठोदेखि खसीबोकासम्ममा छुट
बाढी पीडितलाई पाँच लाख दिन माओवादी केन्द्रको माग
नयाँ बिधान पारित गर्न क्यानको विशेष साधारणसभा सुरु